FAQ-Nanjing BeiLiDa Entsha Mathiriyali Indlela Engineering Co., Ltd.
Ulapha : Ikhaya>FAQ
1. Ngaba siyindlela yokubonisana ngodonga kunye nenkampani eyakhiwe ikakhulu ekusetyenzisweni kweeprojekthi. Ngaba sikuthumela isampulu, iisampulu kunye nedatha ye-elektroniki?
Ewe, ulwazi unokulufumana ngqo kwi-Intanethi okanye emva kokongeza amanani oluntu kwi-Payroll GRC kunye ne-UHPC- WeChat, kwaye ubize ngqo umnxeba wentengiso kule nombolo 17372799686/4009910018 yenkxaso yezobugcisa.
2. Ngexesha lolwakhiwo, yintoni ekufuneka ithathele ingqalelo?
Njengomgangatho wedonga lomhlobiso wesakhiwo, imveliso yethu ayihlali kuphela ngokuqina, ukuchasana nokugqwala, ukungahambelani nezinto ezibonakala ngathi zibalulekile, kodwa inokubiza iindleko ezincitshisiweyo kwaye kulula nokusebenza. Ngexesha lokwakha, ukunyanga kwendalo kunokuzanelisa ngokupheleleyo iimfuno zeemfuno ezithile, ukunciphisa iindleko, ukusebenza ngokulula, kwaye kulungele okusingqongileyo.
3. Zingaphi iziphumo kumgangatho weGRC?
Ngokwesiqhelo umphezulu womphezulu une: ikhonkrithi enamanzi, isiphumo se-terrazzo, isicatshulwa, isiphumo sokwenza udumba, ukulinganisa ilitye, ukulinganisa ukusebenza kweenkuni, isiphumo se-bush-hammerd, isandstone sandwich, njl.
4. Sesiphi ubukhulu obukhulu beGRC?
Ngaphandle kokusetyenziswa kokuthwala isakhelo sesinyithi, ubukhulu obukhulu yi-1.2m * 2.4m; Kwimeko ye-teh yokuthwala isakhelo sesinyithi, ubukhulu obukhulu yi-2.4 * 13m.
5. Yeyiphi imilinganiselo yeGRC?
Ubungqingqwa beGRC ngu-1.8 ~ 2.0T / m³ life ubomi benkonzo ye-GRC ngama-50 ee-1; umlinganiso olungileyo A8; ukugoba amandla amakhulu kune-30 ~ 40Mpa; amandla oxinzelelo mkhulu kune-80 ~ 14Mpa; ukuthathwa kwamanzi kungaphantsi kwe-9%, iziphumo zokuvavanywa kwenkampani yethu zingaphantsi kwe-25%, ukuxhathisa ukumkhenkqisa kunye nokucwilisa kukwi-50 degrees, kunye novavanyo ezingama-25, ngaphezulu kovavanyo olu-10 olufunwa lucacisiwe; Ukuxhathisa kuxinzelelo yi .30 ~ XNUMX N mm / mm².
6. Zeziphi iimpawu ze-GRC?
Iphaneli yodonga ye-GRFC yindawo eyakhiwe ngaphandle yodonga eyakhiwe ngokusebenzisa imodeli enkulu ye-GRC Gao Qiangban njengomhlobiso kunye nokusebenza komzimba ophambili, iintlobo ezahlukeneyo zeenkqubo zokubambela ezinokuguquguquka njengemizimba yokudibanisa, kunye neenkqubo zokufaka, ukufakelwa eludongeni ngaphandle, iipaneli zodonga lwangaphakathi, Iiphaneli zodonga ze-GRC zinezibonelelo zilandelayo ezingaxabisi ngaphezulu kwendonga yamatye yecala lendalo:
1.Umoyiyano wokwahlula-hlukeneyo, ngokobuchule bokumodareyithwa kwemodeli.
3.Energy Ulondolozo kunye nokhuselo lwendalo, inokutshintsha ilitye.
5. Iphaneli yodonga lwe-GRC ineendleko eziphantsi kunye neendleko.
6. Iiphaneli zodonga lwe-GRC zodonga ziya kufakwa ngaphakathi kwiimveliso kwaye zifakwe ngokulula nangokukhawuleza.
7. Zeziphi iinkqubo zemveliso eziqhelekileyo ze-GRC?
Inkqubo yokutshiza yeyona ndlela indala neyona isetyenziswa kakhulu yokwenza iimveliso ze-GRC, kubandakanya incwadi yezandla kunye nezenzekelayo. Le ndlela yaqala isetyenziselwa ukwenza iimveliso zekhonkrithi eziqinisiweyo zekhonkrithi (GRC) yiBritane yoPhando ngeZakhiwo zaseBritane phaya ekuqaleni kweminyaka yo-1970.
Inkqubo ye-primex yitayile yeglasi enqunywe kufutshane kunye nesamente eyenziwe ngodaka oluxutywe kunye ukuze yenze umxube weglasi yesamente yesamente, emva koko ukuthulula okanye indlela yokutshiza yenziwa kwiimveliso.
8. Yintoni umahluko phakathi kweGRC, GRG, GRP UHPC?
I-GRC: Isixhobo se-GRC sisixhobo esidityanisiweyo esenziwe sisamente, isanti, amanzi, iglasi ifayibha, izongezo kunye nokunye okuhlanganisiweyo kunye nomxube. Isamente kunye nokusabela kwamanzi kumjelo emva kokuqina, ukwakhiwa kwelitye lesamente, isanti (okanye ezinye izinto ezihlanganisiweyo) eziqiniswe ngokudibeneyo, kunye nesamente yeglasi ye-anchor yeglasi, yakha into eyasebenza kakuhle. Ukugcwalisa kwesanti kunye nezakhelo i-GRC, kunye nefayibha yeglasi iyayiqinisa. Ngokuyintloko isetyenziselwa ukuhlobisa ngaphandle.